Barcelona 6-1 Sevilla: Blaugrana Oo Camp Nou Ku Gumaaday Sevilla, Coutinho Oo Laba Gool Dhaliyay, Messi Oo Taariikh Cusub Sameeyay Iyo Wacdarihii Copa Del Rey. - Latest football news
Barcelona 6-1 Sevilla: Blaugrana Oo Camp Nou Ku Gumaaday Sevilla, Coutinho Oo Laba Gool Dhaliyay, Messi Oo Taariikh Cusub Sameeyay Iyo Wacdarihii Copa Del Rey.
Barcelona ayaa u soo baxday afar dhamaadka koobka ay difaacanayso ee Copa Del Rey kadib markii ay gumaad wayn Camp Nou ugu gaysatay kooxdii ay guuldarada kulankii lugtii hore kala soo laabtay ee Sevilla. Barcelona ayaa si naxariis daro ah uga aarsatay Sevilla waxayna ku garaaceen 6-1.
Coutinho ayaa laba gool kulankan ka dhaliyay halka Lionel Messi uu taariikh cusub abuuray isaga oo 50 gool ka dhaliyay Copa Del Rey. Barcelona ayaa xili ciyaareedkii sagaalaad oo xidhiidh ah u soo baxday afar dhamaadka Copa Del Rey oo afartii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysteen.
Barcelona iyo Sevilla ayaa kulan cajiib ah isakga hor yimid Camp Nou iyada oo Barcelona ku qasbanayd in ay ka soo kabsato guuldaradii 2-0 ka ahayd ee ay Sevilla kala soo laabtay kulankii lugtii hore ee siddeed dhamaadka Copa Del Rey, waxayna labada kooxood sidii looga bartay soo bandhigeen ciyaar cajiib ah.
Daqiiqadii 12 aad Philippe Coutinho ayaa daah furay gool dhalinta Barcelona kadib markii Blaugrana lagu abaal mariyay rekoodhe iyada oo Promes uu qalad ku galay Lionel Messi laakiin Messi ayaa si uu kalsoonida Coutinho u dhiso waxa uu siiyay in uu tuuro rekoodhahan kaas oo uu Coutinho goolka furitaanka ku dhaliyay.
Daqiiqadii 24 aad Sevilla ayaa markeeda lagu abaal mariyey rekoodhe kadib markii uu Pique dhulka dhigay Mesa wuxuuna garsooruhu tilmaamay rekoodhihii labaad intii aan la gaadhin nusu saacihii hore ee kulankan.
Daqiiqadii 26 aad Banega ayaa kooxdiisa Sevilla u tuuray rekoodhaha lagu abaal mariyay laakiin goolhaye Jasper Cillessen ayaa badbaadin sameeyay wuxuuna awooday in uu kooxdiisa Barcelona ciyaarta ugu sii hayay goolka ay hogaanka ku hayeen.
Daqiiqadii 31 aad Arthur Melo ayaa kubbad aan la rumaysan karin ku kala dhantaalay kooxda Sevilla wuxuuna isku saaray Ivan Rakatic iyo goolhayaha Sevilla laakiin xidigii hore ee Sevilla ee Rakitic ayaa kubbada dhinac mariyay goolhayaha si uu ciyaarta uga dhigo 2-0 ay Barca iskaga soo celisay labadii gool ee kulankii lugtii hore ee Copa Del Rey.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay iyada oo barbaro ay labada koxoood ku ahaayeen natiijada wadarta labada kulan laakiin Barcelona oo soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah ayaa u muuqatay mid ayna Sevilla joojin karin.
Daqiiqadii 53 aad Philippe Coutinho ayaa dhaliyay goolkiisa labaad iyo kan saddexaad ee kooxdiisa Barcelona kadib markii uu gool caawin ka helay Luis Suarez wuxuuna Coutinho ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Barcelona wadarta labada kulan hogaanka si buuxda ugu qabtay,
Daqiiqadii 54 aad Barcelona ayaa isla markiiba la timid goolkeeda afraad ee ay murugada ugu abuurtay kooxdii Sevilla ee labada gool kulankan la timid wuxuuna markan Messi awooday in uu Sergi Roberto ka caawiyay in uu shabaqa soo taabto waxayna ciyaartu noqotay 4-0 ay Barca ku xasuuqayso Sevilla.
Barcelona ayaa intaas kadib dabacsaanaan muujisay waxayna Sevilla daqiiqadii 67 aad heshay fursada ay rajadeeda sare ugu soo qaaday kadib markii uu Guilherme Arana dhaliyay goolka kaliya ee ay ciyaartan ka dhaliyeen kaas oo ay Sevilla ku heshay fursada ay gool kale oo kaliya ugu baahnayd in ay soo baxdo waxayna ciyaartu noqotay 4-1 ay Sevilla rajo wayn heshay.
Lionel Messi ayaa lumiyay fursado aan looga baran isaga oo xataa birta u garaacay Sevilla waxayna jamaahiirta Barcelona dareemeen cadaadis badan maadaama oo ay Sevilla hal gool oo kaliya ku soo bixi kartay waxayna Barca sii waday in ay fursado cadaan ah qasaariso.
Daqiiqadii 87 aad Luis Suarez ayaa si rasmi ah u go’aaiyay ciyaarta kadib markii uu dhaliyay goolka shanaad ee ay Sevilla ku quusatay waxaana kubbad ay Sevilla koorne ku soo tuuray weerar deg deg ah ku soo abuuray Jordi Alba oo markiiba Messi la ciyaaray halka Messi uu Vidal u bixiyay wuxuuna Vidal ku celiyay Jordi Alba oo caawinta Suarez sameeyay waxayna ciyaartu noqotay 5-1 ay Barca walwalkii kaga baxday.
Daqiiqadii 92 aad ee dhamaadkii ciyaarta Lionel Messi ayaa taariikhda uu kulankan ka doonayay ugu danbayn gaadhay wuxuuna dhaliyay goolkiisii 50 aad ee tartanka boqorka Spain ee Copa Del Rey wuxuuna caawin ka helay Jordi Alba oo gool caawintiisii labaad daqiiqo kooban ku sameeyay.
Lionel Messi ayaa ciyaarta ka dhigay 6-1 waxayna sidaa Barcelona xili ciyaareedkii sagaalaad oo xidhiidh ah ugu soo baxday afar dhamaadka koobka Copa del Rey ee ay afartii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysatay waxayna Sevilla oo kulankii hore 2-0 ku soo guulaysatay is aragtay iyada oo murugo kale kala kulantay Barca oo ay xili ciyaareedkii hore finalkii Copa Del Rey ceeb kala kulmeen.